UkuKhanya kweNdawo | Ukukhanya kweWall Wall | Ukukhanya Kwezitalato ze-LED | xLedLight.com
Izibane ze-LED zangaphakathi
Isilondolozi se-Wall Wall
Izibane zePhuli ze-LED
Izibane ze-CNC zomatshini
Isilondolozi se-Wall Wall Ukukhanya kweNdawo Izibane zePhuli ze-LED
I-LongNor Optoelectronics Co, Ltd.ikhokele Ukukhanya kweNdawo, Isilondolozi se-Wall WallI-Flexible Led Linear yomvelisi kunye nomthengisi yasekwa ngo-2008 ngabasebenzi abangaphezulu kwama-200 ebeseShenzhen China. Iimveliso zethu zisetyenziselwa ikakhulu ukukhanya kwecawa, ukukhanyiswa kwekhasino, Ukuhonjiswa kwehotele, izibane zokuhlala, ukukhanya kwezorhwebo kunye nokukhanya kwemizi-mveliso. Inkampani yethu yaqala ukuvelisa i-neon flex, Izibane ze-LED, I-LED eguqukayo yomgama ekukhuleni kwangoko ngo-2008-2011. Iinkonzo ze-OEM kunye ne-ODM zibonelelwe. kunye neqela leR & D elomeleleyo nelinobuchule kunye namava eminyaka kubuchwephesha bokukhanyisa i-LED kunye neemveliso, ezinokuqinisekisa umgangatho osemgangathweni kunye nokuphila ixesha elide. Sikwabonelela ngoyilo lwesiphumo sokukhanyisa. Eyethu Izibane ze-Fountain ze-LED, Izibane ze-LED zangaphakathi, Ukukhanya kwelanga lokukhanya, Ukunyuka kwemithi yesundu, I-Flexible LED Strip, Izibane ze-CNC zomatshini kunye ne CE, RoHS, FCC, TUV, SAA, ISO9001 eqinisekisiweyo.
Izibane zePalm Tree
Izibane ezingama-48W Palm Tree Up zilungele amakhaya, iihotele, iiklabhu zelizwe, izakhiwo zeshishini, iipaki kwaye phantse zonke izicelo zokukhanyisa umthi wesundu. Ingasetyenziswa njengomthi ophakamileyo wesundu, ukukhanya phantsi okanye zombini ngaxeshanye. Izibane ezimilise okwesibane ukukhanyisa amasundu ebusuku, khanyisa umhlaba wakho! Ngobukhulu beedayimitha ezahlukeneyo kunye nee-watts ezivela kwi-12W-72W Palm Tree Up Lights Zonke izinto ziyi-aluminium kwaye aziyi kurusa zishiya umthi ungalimazi IP65 engenamanzi, iglasi enobushushu i-AC100-250V okanye i-AC / DC 24V CREE 3030 ye-LED ngaphakathi kwe-White White, i-Nature white, Cool Mhlophe, Bomvu, Luhlaza, Luhlaza, Mthubi, Golide, RGB Guqula, i-DMX512 8, 15, 30,60 ukukhanya kwe-angle ukukhanya
Izibane ezimile ngeringi ukukhanyisa imithi yesundu ebusuku, izibane zePalm Tree Ring zilungele amakhaya, iihotele, iiklabhu zelizwe, izakhiwo zeshishini, iipaki kwaye phantse zonke izicelo zokukhanyisa umthi wesundu. Ingasetyenziswa njengomthi wesundu okhanyayo, ukukhanya okukhanyayo okanye zombini ngexesha elinye Ngobukhulu obuhlukeneyo beedayitile kunye neewat ezivela kwi-12W-72W Zonke izinto zenziwe ngealuminium kwaye azizukurusa zishiya umthi ungonzakalanga IP65 ingangeni manzi, iglasi enobushushu AC100-250V okanye AC / I-DC 24V CREE 3030 i-LED Ngaphakathi okuMhlophe okufudumeleyo, iNdalo emhlophe, uMhlophe opholileyo, oBomvu, oGreen, uBlue, oMthubi, oGolide, ukutshintsha kweRGB, i-DMX512 8, 15, 30,60
Iringi yokukhanyisa umthi wesundu
Izibane ezenziwe ngeringi ukukhanyisa imithi yesundu ebusuku, amakhonkco okukhanyisa umthi wePalm alungele amakhaya, iihotele, iiklabhu zelizwe, izakhiwo zeshishini, iipaki kwaye phantse zonke izicelo zokukhanyisa umthi wesundu. Ingasetyenziswa njengomthi wesundu okhanyayo, ukukhanya okukhanyayo okanye zombini ngexesha elinye Ngobukhulu obuhlukeneyo beedayitile kunye neewat ezivela kwi-12W-72W umthi wokukhanyisa umthi wesundu Zonke izinto zenziwe ngealuminium kwaye aziyi kurusa zishiya umthi ungonzakalanga IP65 ungangeni manzi, iglasi enobushushu AC100- I-250V okanye i-AC / DC 24V CREE 3030 ye-LED Ngaphakathi okuMhlophe okuFudumeleyo, iNdalo emhlophe, uMhlophe oPholileyo, oBomvu, oGreen, oBlue, Mthubi, oGolide, noTshintsho lweRGB, i-DMX512 8, 15, 30,60
Ukukhanya kweSpike Spike
Ukukhanya kwe-Spike Light, ukuba ukukhanya kwe-landscape kukupeyinta ngokukhanya, ukukhanya kwe-spike Lights ziibrashi. Izibane ze-Spike zisetyenziselwa ukugxininisa ekukhanyeni kwangaphandle-ukubiza ingqalelo kwizinto ezithile zokwakha okanye iimpawu zomhlaba. Ngokungafaniyo nezibane zezikhukula ezikhanyisa ukukhanya kwindawo ebanzi, izibane ezibengezelayo zinemitha emxinwa ukuze bakwazi ukugxila kwinto enye ngexesha.
Ingqungquthela yokuLwa kwe-Inground AS
Ukukhanya okungaphakathi, i-LED enground Lights kunye ne-landscape ye-LED yokukhanyisa ifektri e-China, ukuveliswa kwe-Outdoor LED Spotlight, i-LED Wall Washer, i-Fountain LED Lights
Uthotho lwezibane ezingqonge i-AR
I-Inground Lights AR Series kunye ne-AR COB Series, i-AR inokukhetha ukusuka kwi-8 Degrees ukuya kwi-120 degrees beam angle. Kodwa i-AR COB kwi-120 degree esisigxina kunye ne-wide angle angle. Isetyenziselwa indawo yokuma komhlaba eyahlukileyo.
Izibane ze-LED zangaphakathi kwe-AE
Ukukhanya kwe-LED enground kunye ne-landscape ye-LED yokukhanyisa umbane e-China, ukuveliswa kwe-Outdoor LED Spotlight, i-LED Wall Washer, i-Fountain LED Lights
Izibane ze-LED zangaphakathi komhlaba
Ukukhanya kwe-LED yangaphakathi kunye nokukhanya kwefektri ye-LED mveliso e-China, ukuveliswa kwangaphandle kwe-LED, i-LED Wall Washer, izibane ze-Fountain
I-LED Wall Wall WW15 Series
I-LED Wall Washer Uthotho lwe-WW15 lulungele usetyenziso lwangaphandle lokuhlamba udonga kwaye lunokulawulwa ngokuzimeleyo ngaphandle kwesilawuli se-DMX ngemibala elula kunye neziphumo zokutshintsha umbala. Ulawulo lwe-DMX lukhetho lokukhanyisa ngakumbi kunye nemibala ethile. Isixhobo sisebenza kwi-DC15V, 24V okanye kwi-120V AC hardwire application.
Washer Wall LED WW10 Series
IWall Washer LED WW10 Series sisizukulwana esilandelayo sodonga lweewherry uthotho lwentsebenzo eyandisiweyo, ukusebenza kakuhle, ukuphuma kwesibane, kunye nezinye iindlela zolawulo. Uthotho lwe-WW10 lulungele usetyenziso lwangaphandle lokuhlamba udonga kwaye lunokulawulwa ngokuzimeleyo ngaphandle kwesilawuli se-DMX ngemibala elula kunye neziphumo zokutshintsha umbala. Ulawulo lwe-DMX lukhetho lokukhanyisa ngakumbi kunye nemibala ethile. Umdlalo usebenza kwi-DC24V, 120V okanye kwi-277V ye-AC hardwire application.
Izibane zeWall Wall WW8 Series
Uthotho lwe-WW8 sisizukulwana esilandelayo sothotho lweewherry uthotho olwenziwe ngokusebenza okwandileyo, ukusebenza kakuhle, ukuphuma kwesibane, kunye nezinye iindlela zolawulo. Uthotho lwe-WW8 lulungele usetyenziso lwangaphandle lokuhlamba udonga kwaye lunokulawulwa ngokuzimeleyo ngaphandle kwesilawuli se-DMX ngemibala elula kunye neziphumo zokutshintsha umbala. Ulawulo lwe-DMX lukhetho lokukhanyisa ngakumbi kunye nemibala ethile. Umdlalo usebenza kwi-DC24V, 120V okanye kwi-277V ye-AC hardwire application.
LED Wall yomsuki weengubo WW7 Series
I-WW7 sisizukulwana esilandelayo sothotho lweewherry uthotho olwenziwe ngokwanda kokusebenza, ukusebenza ngempumelelo, ukukhanya, kunye nezinye iindlela zolawulo. Uthotho lwe-WW7 lulungele usetyenziso lwangaphandle lokuhlamba udonga kwaye lunokulawulwa ngokuzimeleyo ngaphandle kwesilawuli se-DMX ngemibala elula kunye neziphumo zokutshintsha umbala. Ulawulo lwe-DMX lukhetho lokukhanyisa ngakumbi kunye nemibala ethile. Umdlalo usebenza kwi-DC24V, 120V okanye kwi-277V ye-AC hardwire application.
Izibane zamachibi okuqubha kunye nomzi-mveliso wokukhanyisa i-LED e-China, ukuveliswa kwe-Outdoor LED, i-LED Wall Washer, i-Fountain LED Lights, Le nto ngexabiso elikhuphisanayo nge-6W, 9W, 12W, 15W, 18W kunye ne-24W Izibane zokuqubha.
Izibane zephuli zasemhlabeni
Izibane zasemanzini eziphantsi komhlaba kunye nemveliso yokukhanyisa kwe-LED e-China, umenzi we-Outdoor LED Spotlight, i-LED Wall Washer
Sineentlobo ezi-3 zePar56 izibane zamachibi e-LED ngezinto ezahlukeneyo. Inokuba kukulawula okukude kumbala wephupha le-RGB okanye uyiyeke itshintshe umbala ngokuzenzekelayo. Ixesha elide kakhulu kunye newaranti yeminyaka emi-3
Izibane zephuli ze-LED ziyaziwa ngokusebenza kwazo, Uluhlu olubanzi lwemibala lunokuphinda luveliswe ngaphandle kokufuna ukusebenzisa izihluzi ezongezelelweyo. Izibane zePhuli ze-LED zihlala ixesha elide kwaye inani lamaxesha zicinyiwe kwaye zivuliwe, isenzo esiqheleke kakhulu kwizibane zamanzi, azinampembelelo kubomi babo obuluncedo. Singafezekisa nawuphi na umbala sisebenzisa umxube wesilawuli se-DMX512.
I-LED eguqukayo ye-DRL Light Bar
I-LED eguqukayo ye-DRL Light Bar into enelungelo elilodwa lomenzi. Yindlela yobume benyoka yobudlakudla, i-Osram 5050 ye-LED ngaphakathi. inokugoba xa ufuna. Uyilo lwembonakalo eyahlukileyo, uyilo luphefumlelwe "yinyoka yobudlakudla" Ukufakwa kweBendable, kwamkela imithombo yokukhanya ephezulu yamandla e-LED, isithsaba sisebenzisa iilensi zekondenser ukuze kuphume ukukhanya okukhanyayo, uyilo olwahlukileyo, zinokugoba iidigri ezingama-360 zokufakelwa kumacala ahlukeneyo; Uluhlu olubanzi lufanelekile kwindawo yokufaka imoto; umva kufakwe izinto ezincamathelayo emacaleni amabini inokuncanyathiselwa, kwaye amacala amabini omzimba wesibane afakelwe imingxunya yokujija izikrufu. Umzimba wesibane utywinwe kwaye awunamanzi. Ibakala lokungena manzi IP67
I-Bar ye-Bar ekhanyayo
I-COB ye-LED Light Bar, ii-Chips kwibhodi ye-aluminium, ixesha elide kakhulu kunye nokuncipha kokukhanya okuphantsi, i-luminescence ifana kakhulu, ikhusela amehlo, kwaye ayikhazimli
I-240V I-LED neon Linear
I-240V ye-LED ye-Neon Linear-Linear eguqukayo yesikhanyiso se-LED sokukhanyisa ngaphandle kwangaphandle kunye nokukhanya okupheleleyo okuneempawu ezingenanto. Ukutsha okuziswe yile migangatho mibini yokukhanya okunokukhanya okuvulekileyo kwavula iingcango ezintsha kuyilo lokukhanyisa ezazingafikeleleki nakweziphi na izibane ngelo xesha. Umgca we-neon wethu we-LED ufumana ngokukhawuleza ukuqatshelwa kweengcali zoyilo lokukhanyisa kunye neengcali zentsimi- zihlala zikotshwa, azizange zilingane.
I-110V I-LED neon Linear
I-110V ye-Neon Linear. Kule minyaka idlulileyo, siqokelele igalelo kunye nemibono evela kubayili bokuyila, abayili bezakhiwo, iinjineli. siphuhlise uMbala wenene. Umbala oyinyani sisikhanyiso se-LED sisebenzisa itekhnoloji entsha yokufaka i-polyurethane encapsulation enikezela nge-IP67 ingress protection kunye nokudityaniswa okuphezulu kwesibane se-LED, kuthintela nakuphi na ukutshintsha kweCCT: Umbala wenene. Iyafumaneka ngeendlela ezimbini. Indawo yokuqala ebizwa ngokuba yiTop View ithatha usetyenziso olugqitywe ngumanduleli wayo we-2D yokugoba ngokuthe ngqo kumhlaba okhanyayo. Umahluko wesibini wandisa imida yoyilo lokukhanyisa ngokubonelela ngomgca wokukhanya ohambelana ngokuchanekileyo onokujija okanye ukugoba kubukhulu be-2 (3D) ukuze ulandele naziphi na iirvevu ezikhoyo kwiingcinga zokwakha zangoku. Zombini eziPhezulu
Izibane zomsebenzi we-CNC
Izibane zomsebenzi we-CNC ziqinisekisa iminyaka yokusebenza ngaphandle kokugcinwa kweendleko ezincitshisiweyo, ukubonakala okuphuculweyo kovavanyo olubonakalayo lomntu, kwaye kukhokelela kumgangatho wemveliso ophuculweyo kunye nemveliso. Izibane ze-LED zibeka ngokulula indawo yokubengezela ukuze kuphuculwe ukusebenza kwesikhululo somsebenzi kunye nokunciphisa ukutshintshwa, ukulungiswa kunye neendleko zamandla ngokubanzi. Izibane zomsebenzi we-CNC, ukukhanya kwemizi-mveliso kunye nokusetyenziswa kwesixhobo somatshini. Sigcina umatshini wamashishini izibane zomsebenzi we-LED ezikulungeleyo imeko yevenkile enzima yomatshini. isitayile se-tubular, isitayile esimiselweyo somsebenzi osindayo wokukhanya kwe-LED zizinzile kwaye zilungele indawo yoomatshini bokuhlambela-ukumelana namanzi, ioyile, isipholisi kunye nezinye iikhemikhali. Ukufakwa kwesibiyeli ngokutyibilika kwindalo iphela kuvumela ukufakelwa kokukhanya okulula kokusebenza kwizitishi zomsebenzi ze-CNC. Ukuba awuyiboni i-CNC Machine Work Light
Amacala amabini e-CNC Ukukhanyisa umatshini
Amacala amabini e-CNC Machine Lighting aqinisekisa iminyaka yokusebenza ngaphandle kokugcinwa kweendleko ezincitshisiweyo, ukuphucula ukubonakala kokuhlolwa komntu, kwaye kukhokelela ekuphuculweni komgangatho wemveliso kunye nemveliso. Izibane ze-LED zibeka ngokulula indawo yokubengezela ukuze kuphuculwe ukusebenza kwesikhululo somsebenzi kunye nokunciphisa ukutshintshwa, ukulungiswa kunye neendleko zamandla ngokubanzi. Amacala amabini e-CNC Ukukhanyisa umatshini, ukuvelisa ukukhanya kwezibane kunye nokusetyenziswa kwezixhobo zomatshini. Sigcina umatshini wamashishini izibane zomsebenzi we-LED ezikulungeleyo imeko yevenkile enzima yomatshini. isitayile se-tubular, isitayile esimiselweyo somsebenzi osindayo wokukhanya kwe-LED zizinzile kwaye zilungele indawo yoomatshini bokuhlambela-ukumelana namanzi, ioyile, isipholisi kunye nezinye iikhemikhali. Ukufakwa kwesibiyeli ngokutyibilika kwindalo iphela kuvumela ukufakelwa kokukhanya okulula kokusebenza kwizitishi zomsebenzi ze-CNC. Ukuba awuboni i-CNC Machine Work
I-Tube ye-LED ye-CNC yokuKhanya koMsebenzi
Izibane ze-Tube ze-CNC zomsebenzi woMatshini ziqinisekisa iminyaka yokusebenza ngaphandle kokugcinwa kweendleko ezincitshisiweyo, ukubonakala okuphuculweyo kovavanyo olubonakalayo lomntu, kwaye kukhokelela kumgangatho wemveliso ophuculweyo kunye nemveliso. Izibane ze-LED zibeka ngokulula indawo yokubengezela ukuze kuphuculwe ukusebenza kwesikhululo somsebenzi kunye nokunciphisa ukutshintshwa, ukulungiswa kunye neendleko zamandla ngokubanzi. I-Tube ye-CNC ye-CNC yokuKhanya koMsebenzi, ukuvelisa ukukhanya kwezibane kunye nokusetyenziswa kwezixhobo zomatshini. Sigcina umatshini wamashishini izibane zomsebenzi we-LED ezikulungeleyo imeko yevenkile enzima yomatshini. isitayile se-tubular, isitayile esimiselweyo somsebenzi osindayo wokukhanya kwe-LED zihlala zizinzile kwaye zilungele indawo yoomatshini bokuhlambela-ukumelana namanzi, ioyile, isipholisi kunye nezinye iikhemikhali. Ukufakwa kwesibiyeli ngokutyibilika kwindalo iphela kuvumela ukufakelwa kokukhanya okulula kokusebenza kwizitishi zomsebenzi ze-CNC. Ukuba awuyiboni i-CNC
Isibane se-LED somatshini we-CNC
Isibane se-LED somatshini we-CNC, i-B0012-22WL44 ene-CE EMC. Ukuzinza okungaphezulu, okungacimi isibane somatshini we-CNC, Isixhobo se-CNC seLampu ye-LED siqinisekisa iminyaka yokusebenza ngaphandle kokugcinwa kweendleko ezincitshisiweyo, ukubonakala okuphuculweyo kovavanyo lokubonwa kwabantu, kwaye kukhokelela ekuphuculweni komgangatho wemveliso kunye nemveliso. Izibane ze-LED zibeka ngokulula indawo yokubengezela ukuze kuphuculwe ukusebenza kwesikhululo somsebenzi kunye nokunciphisa ukutshintshwa, ukulungiswa kunye neendleko zamandla ngokubanzi. Izibane zomsebenzi we-LED zoomatshini be-CNC, ukuvelisa ukukhanya kwezibane kunye nokusetyenziswa kwesixhobo somatshini. Sigcina umatshini wamashishini izibane zomsebenzi we-LED ezikulungeleyo imeko yevenkile enzima yomatshini. isitayile se-tubular, isitayile esimiselweyo somsebenzi osindayo wokukhanya kwe-LED zizinzile kwaye zilungele indawo yoomatshini bokuhlambela-ukumelana namanzi, ioyile, isipholisi kunye nezinye iikhemikhali. Isilayidi esinyukayo somhlaba wonke
Ukukhanya kwekamva yiLaer Lighting okanye i-OLED Lighting?
Umhla: 24 / 08 / 2018
Kukho iimbini ezimbini ezisisiseko zezixhobo zokukhanyisa ezizinzile: i-LED, i-OLED. Ii-LED zangoku zibukhulu becala (malunga ne-square millimeter square) kwaye zigqamile kakhulu. Sekuphuhlisiwe malunga ...
Ukumenyezelwa kwegama leNkampani iTshintsho
Umhla: 04 / 06 / 2018
Abathengi abaXabisekileyo abaXabisekileyo, abaXhasi, kunye namaQabane kuShishino; Ukuqala kwe-2 kaJuni ngo-2018, sonwabile ukwazisa ukuba sitshintsha igama lenkampani yethu ukuba libe ngu: LongNor Optoelectronics Co, Limited yethu ...
Indlela eya kwixesha elizayo elizayo-i-LED yokukhanya ityhubhu
Umhla: 15 / 12 / 2016
Nangona isifiso sethu sokutya umbane siyaqhubeka sanda, ngokunjalo ukuqonda kwethu ngesidingo sokwandisa ukusebenza kwayo. Enye indawo apho yonke ishishini lorhwebo lingazange lisebenzise kuphela ...
Ulwazi lokukhanyisa kwe-LED
Ukukhanya okuKhanya kweDiode (i-LED) kuyisistim se semiconductor eguqula ugesi ngokukhanya. Ukukhanya kwe-LED kuye kwavela kwi-1960s, kodwa ngoku iqalisa ukuvela kwindawo yokuhlala ...
I-150 i-lumen nge-watt Led Tube izibane
I-150 i-lumen nge-watt Led Tube izibane - kungekhona ukuba akukho nto iphosakeleyo ngeembane zangaphambili zokukhupha i-sodium. Ukuvelisa ngokuqhelekileyo konke ukukhanya kwabo kwinqanaba lokuphakama elikufutshane nentshukumo yobukhulu bomntu ...
I-Hot Spring Club Ihotele Yobunjineli Yobunjineli
I-LED ye-Neon Flex yeeNkwenkwezi zeNkwenkwezi zeNkwenkwezi zeNkqutyana
Indawo yokuThengwa kweZakhiwo zokuKhanya ukuKhanya
I-LED Neon Flex yeCingo yeBingo
I-Neon Flex ye-Bingo yeCasino ...
Connect kunye nathi
I-LongNor Optoelectronics Co., Limited
Yongeza: I-LiHe Industrial Zone, i-NanShan, i-ShenZhen, i-China
Ilungelo lokushicilela © 2007-2021 LongNor Optoelectronics Co, Ltd. Onke amalungelo agciniwe